VaMadhuku Vovimbisa Kuburitsa VaHaruzivishi Mujeri Svondo Rino
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Muzvinafundo Lovemore Madhuku vanova gweta vanoti vane hurongwa hwekuendesa mapepa kudare repamusoro neMuvhuro kuti nhengo yevechidiki yebato reMDC Alliance VaMakomborero Haruzvivishe vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Muzvinafundo Madhuku vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti VaHaruzivishe vachaburitswa muhusungwa svondo rino.
VaHaruzivishe vave nemwedzi mipfumbamwe vakapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva yavaipomerwa asi havana kubuditswa vachinzi vaimwe mhosva yavakanzi nedare ramejastitiri vasapihwe mukana wekubvisa marti yechibatiso.
Mhosva dzaVaHaruzivishe dzinosanganisira kuti vanonzi vakaramba kusungwa nemapurisa uye kuti vaida kupamba vashandi vepakambani yeImpala apo vairatidzira nevesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union mushure mekupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwemumwe mudzidzi VaTawanda Muchehiwa kuBulawayo.
Kunyangwe paine mumwe anofungidzirwa kuti musori akabuda pamadandemutande achirova vatori venhau nevadzidzi pakuratidzira kwevadzidzi, haasati asungwa kusvika parizvino.